ကဗျာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 221
အောင်ဝေး ဇူလိုင် ၁၃၊ ၂၀၁၂ ခြင်္သေ့ကို ဂဠုန် သုတ်မည်။ အနင်းခံတဲ့ စပါး (အမှန်တရား) သန်မည်။ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းပေါ်က (လယ်သူမကြီးတွေ) ကြိမ်မီးအုံးနေတဲ့ အလွမ်း ခေတ်ကို ၀ှမ်းမည်။ တစ်မိုးသောက်ရင် ရွာရိုးကိုးပေါက် အိပ်မက်နှိုးတဲ့ ခလောက်သံ ညိုးညိုး ညံမည်။ ထွန်တုံးပေါ် မျက်ရည် ချောင်းစီး မြေတုန် ဟည်းမည်။ ကန်သင်းရိုးပေါ် သွေးမိုးသွန်းသော် (တို့လယ်သမား) တစ်ခေတ်ထွန်းမည်။ တောမီးကို တောမီးနဲ့မှ ငြှိမ်းလို့ရမည်။ ခင်ရေ- တို့ရင်ထဲ ထယ်သွားနဲ့ခွဲ ထွန်တုံးတိုက်ပွဲဝင်မည်။ ။ No tags for this post.
လင်းနွေးအိမ် ဇူလိုင် ၇၊ ၂၀၁၂ အပြောင်းအလဲဆိုပါလားဟေ့ ဇူလိုင် ၆ ရက် အမှောင်အောက် မျက်လှည့်ဆရာကြီး ဒေးဗစ်ကော့ပါဖီးရဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတွေ ဗကသတွေကို ရှာနေပုံများ မှုန်ယိုနေတဲ့ဆင်ရိုင်းလို။ အောင်ကျော်ရေ မင်းသေရတာ ဖြေသာပါတယ် မင်းမှာ နယ်ချဲ့လက်ချက်မို့တဲ့ ၆၂ မျိုးဆက်တွေရဲ့ အံကြိတ်သံ ရာစုနှစ်ဝက်ဆိုပေမယ့် ဆူညံနေတုန်းရှိသေးတယ်။ အပြောင်းအလဲအတွက် လွှတ်တော်တက်မှရမတဲ့လား သွားစမ်း စစ်ကျွန်စော်နံတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ ငါရို့ဟာ ဒိုင်အာခီကိုငြင်းပယ်ပြီး လုံးဝ လွတ်လပ်ရေးကိုတိုက်ခဲ့တဲ့ ငါရို့အဖိုးရဲ့မျိုးဆက်တွေ။ ဒီမှာ ဟေ့ကောင် ဂုဏ်သရေရှိယောင်ဆောင်ထားတဲ့ အပြောင်းအလဲကို ညီမလေး ဖြိုးဖြိုးအောင်နဲ့ ဗသကမောင်နှမတွေ အောင်မြင်စွာ ဆုတ်ဖြဲပြလိုက်တဲ့ ဟောဒီ ဇူလိုင်ခုနစ် နှစ် ၅၀ ပြည့်အခါမှာ နာကြင်နှလုံးသားတွေစုရုံး လွတ်လပ်ခြင်းတောင်ကုန်းတွေအားလုံး သိမ်းပိုက်နိုင်လိမ့်မယ်။ ။ No...
နိုင်ဦးညို (ဖိုးဇီးရိုး) ဇူလိုင် ၆၊ ၂၀၁၂ မန္တလေး မန္တလေးနဲ့ ကျုပ်တို့ရေရွတ်ရင်း ဒီလိုအာဂန္တုတွေနဲ့ ထားခဲ့တော့မလား ….။ ကျုပ်တို့ရဲ့ချစ်လှစွာသောမြို့ ဒီမြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့သူတွေ ဒီမြို့မှာ နေဖူးခဲ့သူတွေ ဒီမြို့မှာ ခိုနားဖူးခဲ့သူတွေ ဒီမြို့မှာ လည်ဖူးခဲ့သူတွေ ဒီမြို့မှာ အခြေစိုက်ခဲ့သူတွေ ဘယ်သူတွေဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီမြို့ကို မရောက်ဖူးခဲ့ရင်တော့ ရောက်ဖူးအောင် သွားချင်ကြတဲ့မြို့ …။ မြန်မာမှန်ရင် ဒီမြို့အကြောင်းသိတယ် ကမ္ဘာမှာလည်း ဒီမြို့က ကျော်ကြားတယ် ကုန်းဘောင်ခေတ်ရဲ့ နောက်ဆုံးနေပြည်တော် ဒီကနေ့ထိ ကျုပ်တို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနေပြည်တော် …။ သီပေါမင်းဟာဒီမြို့ကိုတော့ လက်ညှိုးထိုးရောင်းမစားခဲ့ဘူး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းဘဝကို မျိုးချစ်စိတ်တွေ ရှင်သန်စေခဲ့တဲ့မြို့ …။ ပုဗ္ဗ၊ ဒက္ခိဏ မြို့သစ်တည်လည်း ရတနာပုံသမိုင်းက နှစ်ရာကျော်ရှည်ခဲ့ပြီ ကျုပ်တို့ခေတ်မှ ရိုင်းခဲ့ရင်တော့ နောက် နှစ်နှစ်ရာမကလို့...
Page 221 of 229«1...219220221222223...229»